KULMIYAHA UK HA LA JAAN QADAAN KULMIYAHA GUDAHA | Maalmahanews
KULMIYAHA UK HA LA JAAN QADAAN KULMIYAHA GUDAHA
Waxa lagu jiraa xili loo baahan yahay wax qabad xisbi oo laga gudbo hoos u eega. Waxaa bilaabmay loolan seddexda xisbi ka dhexeeya, ayaan darrada jirta waa dalka aanu lahayn aqoon ayaa taal ee UK inay noqotay meel curfi iyo rafashadii Isbaheysigu ku raagtay.
Waxaad ogaydiin sida aqlabiyadda ahyd ee xorta ahayd ee xisbigu hogaanka u doortay iyo murashixiinta. Cidda tirade yar vee ama lay dooray amba xisbi jirimaayo tooda dalka gudihiisa waa la tuuray, cidla ayey marayaan intoodii badnayd wey soo noqotay oo waxay noqdeen duul gar qaatay. Reer UK ka kora inay hogaan idiin qabtaan dad cadhaysan oo raba inay xisbiga dhooqeeyaan.
Waad is taqaaniin ee isu badheedha oo talada aqlabiyaddu gacanta ha ku dhigto. Maqla hoggaanka Guddomiye Xariir, isna heyska jiro raga gabadka ka dhiganaaya ee u sheegaaya beenta in cidi ka soo hor jeedo si ay uga helaan garab ay Golaha fulinta ku kala jabiyaan. Hoggaminta Xariir waa loo baahan yahay waxa se jira koox dhowr ah oo been ku miista si uu uga ficil qaato raga arka dabinka ay wadaan dhowrka qof ee dhambaalka ka sida odhan maayo isbahaysiga ee koox ku dhaar san inay xisbiga burburiyaan oo iyana gabad ka dhigta isbahaysiga laakiin ah qaar ka fog oo u adeegaya xisbiga Wadani.
Waar isu badheedha oo waad taqaaniin cidina idiin tilmamimayso ee iska qabta inta faro ku tiriska ah ee idin qasaysa. Hawl ayaa idin sugaysa ee dhaqaaqa oo shirarka ma djhaleyska ah iska daaya. Dhaqaajiya xisbiga gudha waa horseed cudoon oo masaafo dheer ka horeeye xisbiyada kale. Taas ayaa leydinka rabaa.
Colkayaga reer Burco ee U.K , fartu iyaga ayey ku gudan tay ee heys meydhaan. OO waar reer Burco runta iyo hadal cadaan ayeynu lahayn ee aynu run isu dheegno. Inagaa leyna sugayaa. Oo waxa ley sheegay in cidda hirdameysaa tahay labo garab oo Burco ah…Wallaahi diirad ayaa ina saran waan sida aynu xisbiga KUlmiye ka yeelno ta mustaqbalkeena taabanaysa. Waa leyna doortay oo leynoo hiiliyey, inagana abaal ayaa leynagu leeyahay.. Ha la ilaaliyo wadajirka oo aynu iska qabano abaal laa wayaal ficil xun oo waxuun hoos u eega oon ciil ka korin, oo xumeeyey sharaftii Madaxweynha iyo beeshaba.
Si guud ayaan u hadlay bal se hadday is taagi weydo qof qof ayaan uga warami. Waxa habboon in wanaag leysu sheego iyadoon cidna la ceebeyn.
Qofka aan guusha murashaxa Madaxweynha iyo ku xigeenka rabin meel kuma leh guddiyada Kulmiye meel ay joogaanba.
Aad iyo aad ayaan uga xumay waxa UK ka socda.